Nabi - Wikipedia
Nabi sidoo kale loo qoro Nebi (ingiriis: Prophet; carabi: ﻧﺒﻲ, "Nabiyu"; wadar الأنبیاء, loogu dhawaaqo "Al-Anbiyaa"; sidoo kale: ﺭﺳﻮﻝ, "Rasuul"; wadar ahaan: الرسل; "Ar-Rasul") waa qof karaamaysan oo Ilaahay (s.w) u soo diray dadka. Nabi kasta waxaa loo soo diray in uu baro, u digo, isla markaana hogaamiyo bulsho dad ah. Tirada Nebi ee Alle u soo diray shacabka, qabiilada iyo bulshooyinka dunida aad ayay u faro badan yihiin; sidoo kale, wakhtiyada ay soo baxeen aad ayay u kala duwan tahay.
Kitaabka Quraanka kariimka ah ee diinta Islaamka waxaa ku xusan tiro 25 Nabi iyo Rasuul kuwaasi oo ugu horeeyo aabaheen Nebi Aadam (c.s) uguna dambeeyo nabiga lagu soo khatimay anbiyada iyo rususha waa Nebi Muxamed . Intaasi waxaa dheer, Nebiyada iyo Rusushu waxaa Alle (s.w) u soo diri jirey qoomiyado kala duwan oo deegaano kala duwan ku nool, kuwaasi oo ku fasahaadey ama ka jeestay cibaadadii iyo diintii Alle u soo diray. Marka nebiyada iyo rusushu waxay ahaayeen kuwa dadka uga diga xumaha isla markaana fara wanaaga iyo wadada toosan.
Sida ku cad kitaabka Quraanka kariimka ee aasaaska u ah diinta Islaamka, Ilaahay sareeye wuxuu soo dejiyay afar Kitaab oo la kala siiyay afar Rasuul. Kutubtaasi waxay kala yihiin:
Shaxda Nabiyada iyo Kutubtooda
↑ "Tirada Nebi ee Alle u soo diray shacabka, qabiilada iyo bulshooyinka dunida aad ayay u faro badan yihiin"
↑ 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 Qur'aan ۶:۸۹
↑ 28.0 28.1 Qur'aan ۱۹:۴۹
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabi&oldid=222899"
Last edited on 3 Nofeembar 2021, at 06:23
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Nofeembar 2021, marka ee eheed 06:23.